A Journey Map - Spiceworks Myanmar
ကျွန်တော့်နာမည်ကတော့ သုထက်ထွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ Spiceworks Myanmar Company တွင် Web developer အဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီဘလော့ဒ်လေးကနေဝေမျှပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ Problemတစ်ခုကို မြေပုံတစ်ခုအ ဖြစ် ရေးဆွဲ ပြီး လမ်းကြောင်းရှာဖြေရှင်းပေးမယ့် အဆင့်လေး တွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Problemsဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာ အမြဲကြုံတွေ့နေကြ ရင်းနှီးနေကြ အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်အပါအဝင် လူအတော်များများက နေ့စဉ်Problemsကိုလျစ်လျုရှုတတ်ပြီး ရည်မှန်းချက်တွေ ပန်းတိုင်တွေ ကိုသာ အလေးပေးရေးဆွဲကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ထားရှိခြင်းက ကောင်းမွန်သောအရာဖြစ်ပေမယ့် တကယ့်အကောင်အထည်မဖော်သရွေ့ အိပ်မက်သာသာပဲဖြစ်တည် နေဦးမှာပါ။ Solutionသည် Problemကောင်းတစ်ခုရှိမှလာမည်။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် သည် မိမိဘဝအတွက် တစ်ခုတည်းသော Solution ဟုဆိုကြပါတော့။ ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာတွေကိုလျစ်လျုရှုမယ်ဆိုရင် တော့သိပ်အဆင်မပြေလှဘူး။ သွားမယ့်လမ်းခရီးတစ်လျောက်စာပြဿနာတွေကိုလေ့လာသုံးသပ် ဖြေရှင်းနိုင်မှသာ Solution အဖြစ် ပြီးမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာတွေဆိုတာကလည်း ရည်ရွှယ်ပြီးပေါ်တာမဟုတ်လို့ ကြိုတင်မသိနိုင်ပါဘူး။ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာပီဆို ဘယ်လိုဖြေရှင်းဖူးလဲ? ဘယ်လိုတုန့်ပြန်လဲ? ဘာတွေသင်ခန်းစာယူခဲ့လဲ? ဤမေးခွန်းများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အဖြေတစ်ခုအတွက် ပြဿနာဖြေရှင်းရေးမြေပုံ လေးနဲ့ မိတ်ဆက် ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီမြေပုံသည် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကြီး အောင်မြင်ရေးအတွက် မဟုတ်ပါ။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ရောက်ရှိရေးလုပ် ဆောင် နေစဉ် ကာလပတ်လုံး ကြံတွေ့သမျှ ပြဿနာ ကြီးသေး အရွယ်စုံ ထည့်သွင်းဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေဖြင့် ပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ACTION လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော် ရုံးတက်နောက်ကျသည် ဆိုပါစို့ ပြဿနာအရင်းခံ ACTION ကို ပြန်လည် သုံးသပ် ကြည့်လျှင် ရုံးနောက်ကျရခြင်းမှာ BUS ကားနောက်ကျခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်၊ BUS ကားနောက်ကျခြင်း သည် အိမ်မှ စောမထွက်ခဲ့ ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်၊ အိမ်မှ စောမထွက်ခဲ့ ခြင်းသည် ထမင်းမကျက်၍ စောင့်နေရခြင်းဖြစ်သည်။ ထမင်းမကျက်ခြင်းသည် မနက်ခင်းအိပ်ရာထနောက်ကျခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်၊ နောက်ဆုံးတွင် မနက်ခင်းအိပ်ရာထနောက်ကျခဲ့ခြင်းဆိုသည့် ACTION သည် ညက နောက်ကျမှ အိပ်ရာဝင်ခဲ့သဖြင့် မနက်ခင်းနောက်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အဖြေရရှိခဲ့ပါသည်။ ဤသည်မှာ ရုံးတက် နောက်ကျခြင်းပြဿနာ၏ ACTION ကို သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယအဆင့် အနေဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ACTION တစ်လျှောက် မိမိ၏ စိတ်ခံစားချက်ကို မလိမ်စတမ်း ထည့်သွင်းရေးဆွဲရမည်ဖြစ်သည်။ ပထမပေးထားတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ဥပမာဖြင့် ပြန်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ကျွန်တော့် EMOTION မှာညအချိန်ေ‌နာက်ကျမှ အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာတော့ အချိန်ပိုရသလို ခံစားမိပါတယ်၊ မနက်ခင်းအိပ်ရာထနောက်ကျချိန်တွင် တကယ်အချိန်ပိုမရခဲ့ပဲ လုပ်စရာတွေအတွက် အချိန်မရှိဘူးလို့ ခံစားမိပါတယ်၊ ထမင်းမကျက်ခြင်း၊ BUS ကားနောက်ကျခြင်းတို့အတွက် ဒေါသထွက်မိပါတယ်၊ နောက်ဆုံး ရုံးတက်နောက်ကျခြင်းသည် မိမိ၏ တစ်နေ့တာအတွက် စိတ်အနှောက်အယှက် ပေးခြင်းကို ခံစားရပါတယ်၊ ACTION တိုင်းမှာ EMOTION ရှိပါတယ်။
၃. PAIN POINT
PAIN POINTအနေဖြင့် မိမိ၏ EMOTION ဖြစ်မှုအပေါ်မှုတည်၍ လုပ်ခဲ့သည်များမှ မိမိကို ဘယ်လောက်ထိခိုက်စေခဲ့သလဲဟု ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ ဒေါသထွက် နေသောအချိန်လုပ်မိသည်များကြောင့် မိမိဘာတွေထိခိုက်ခဲ့လဲပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ရုံးတက်နောက်ကျခြင်း ACTION ကြောင့် မိမိ ဘာတွေနစ်နာမှာလဲ စသဖြင့် သုံးသပ် ရေးဆွဲရပါမည်။
ဤအဆင့်ရောက်ရှိချိန်တွင် မိမိမှာဖြစ်နေသောပြဿနာအား သေချာစွာသိပီ ဖြစ်သဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်း သင်ခန်းစာယူခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အပေါ်က ဖော်ပြခဲ့သောဥပမာပြဿနာအား ဖြေရှင်းရလျှင် အရေးကြီးဆုံးမှာ ညအချိန်မှန်မအိပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ညအချိန်မှန်မှန် အိပ်စက်ပါက ပြဿနာအားလျော့ချဖြေရှင်းပြီးသား ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ နောက်တစ် နေ့အတွက် စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ အဖြေမှားနေသေးပါက အစမှ ပြန်သုံးသပ်ရေးဆွဲကြည့်ပါ။ ပိုမို ကောင်းမွန်သော ခရီးတစ်ခုရောက် ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ခရီးလမ်းတစ်ထောက်ချင်း ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ဖို့ ရည်ရွ ယ်ပါတယ်။ ‌အချိန်‌ပေးဖတ်ရှု ‌ပေးလို့ ‌ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Previous Post:CSS Flexbox Properties
Next Post:Domain and Hosting